သီးနှံ Fungicide | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan ,OEM,ODM-cropprotectionmachinery.com
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan သီးနှံ Fungicide ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
မြင့်လယ်ပိုင်းမှာတော့-မြောက်မျက်နှာမြင့်လယ်ယာစိုက်ပျိုး-အရှေ့အိန္ဒိယ,ပြိုလဲ Pinus တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်,ရှိတဲ့အကိုင်းနှင့်ချုံလျှော့ချပိုးမွှားများနှင့်ရောဂါပိုးညှစ်သတ်မှမြေဆီလွှာ၏ထိပ်ပေါ်မှာမီးရှို့ရာနေကြတယ်.ဒီ technique ကိုသုံးပြီးစိုက်ပျိုးအာလူးနှင့်ဂျင်းကောက်ပဲသီးနှံများကိုမကြာခဏပိုပြီးကျန်းမာများမှာ(Chhetry နှင့် Belbahri,2009).အယ်လ်-ဒီအလေ့အကျင့်အဆင်ပြေပြေနဲ့ကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်ပါသည်သော်လည်း-ထိရောက်သော,ဒါကြောင့်လည်းအများအပြားအားနည်းချက်များကိုရှိပါတယ်,ထိုကဲ့သို့သောလေထုညစ်ညမ်းမှုများနှင့်အကျိုးရှိသောမြေဆီလွှာကိုအင်းဆက်ပိုးမွှားကိုသတ်ဖြတ်ခြင်းနှင့်သေးငယ်သောဇီဝသက်ရှိအဖြစ်(Mandal et al.,2004)
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.cropprotectionmachinery.com/my/crop-fungicide.html
သီးနှံ Fungicide ထုတ်လုပ်သူနှင့် သီးနှံ Fungicide ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းစ ,OEM,ODM-ကျော် 72,174 ကမ္ဘာတဝှမ်းဝယ်လက်မှာ cropprotectionmachinery.com